Volgograd State Medical University - Study MBBS na Russian Federation
tọrọ ntọala : 1935
Echefukwala discuss Volgograd State Medical University
The Volgograd State Medical University bụ otu n'ime ndị kasị ama na ukwuu reputable Higher Schools abụọ nọ na Russia na mba ndị ọzọ. Ọ bụ mpako nke ya ukwuu-ruru eru izi ihe mkpara, advanced na-eme nnyocha na ahụmahụ ndị dibịa ndi aha-ha ụwa na-ama. Ọ bụ ugbu a gawa site ndị a ma ama Russian ọkà mmụta sayensị, Academician nke Russian Academy maka Medical Sciences, Prọfesọ Vladimir m. Petrov.
Ị na-ahọrọ nke a University pụtara hiri nne ohere inweta ọrụ nka na ọrụ na-achụ.
The University na-nyere ikike ịbụ site Russian Ministry maka Education maka ozizi nke ma Russian na mba ofesi ụmụ akwụkwọ.
The University na-depụtara na Directory of Higher Medical Ụlọ Akwụkwọ ghọtara site World Health Organisation. Ọ pụtara na anyị na-agụsị akwụkwọ nwere ike inweta ọrụ na mba ọ bụla mgbe-agafe mba ule na-eweta ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
N'oge a, ndị University n'ọkwá n'etiti ọgwụ na ahụ ike na ụlọ akwụkwọ nke Russian Federation. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị nke University bụ ụwa na-ama oto ke mme ukwu ha onyinye tiori na omume nke na nkà mmụta ọgwụ. The University e ịzụ mba ụmụ akwụkwọ ebe 1962. ụmụ akwụkwọ si 113 ekwu, nke bụbu Soviet Union, Europe, Asia, Latin America, Africa mụworo anyị University. N'ime oge a 3000 ndị dibịa, ụlọ na paediatricians na pharmacists e jiworo ya zụọ maka mba ọzọ. ebe ọ bụ na 2000 na Volgograd State Medical University emewo wee ohere izi ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ na-asụ Bekee.
About 70 esenidụt dọkịta na-arụ Postgraduate ọmụmụ na Mahadum kwa afọ.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịmụ na VolSMU, ị ga-ekpet. The uru nke mkpebi dị otú ahụ na-:
dịgasị iche iche nke ohere;
ndị nwere ahụmahụ na-etinye uche n'ihe ikike iche;
sara ikpughe na-adakarị omume;
ezi uche nkuzi ụgwọ na ụlọ mbikọ ulo ahịa.
Ị chọrọ discuss Volgograd State Medical University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews